[Umdlalo] 'Ivela emkhathini, futhi yadla ubuchopho bethu'. Sinda, inqobo nje uma ukwazi. | Kusuka kuLinux
okuluhlaza | | Imidlalo
Sizithola sizulazula edolobheni, sinethoshi kuphela nesibhamu ezandleni zethu. Umuzi uhlaselwe ngabafokazi, futhi abeza ngokuthula. Bafuna ubuchopho bethu !! Uwedwa, uzama ukusinda, kepha… hhayi isikhathi eside.
Amabutho abafokazi asihlasela kuzo zonke izinkomba, uzivikele ngangokunokwenzeka, ngenkathi ufuna izikhali ezintsha nezindlela zokuzivikela kumagagasi akhulayo abafokazi angapheli.
1 Igeyimu ye-Indie
Ngisanda kuthola, leli khasi elinikeza isikhala sonjiniyela bemidlalo ukuze indie yenza indalo yakho yaziwe. Futhi qagela ukuthi yini, sinakho konke isigaba yalezo esingazidlala ku-GNU / Linux.
Phakathi kwabo, ngithole lo mdlalo omuhle, okungukuthi "Isephulelo esingu-100%" izinyanga eziyishumi ezilandelayo! Futhi kulabo abafuna, bangayithenga nganoma iyiphi intengo abayifunayo.
Imininingwane yezinyanga eziyi-10 zalo mnikelo ithathwa ngqo ekhasini elishiwo ngenhla, ngesikhathi kushicilelwa lo mbhalo.
Ngempela ngumdlalo ojabulisa kakhulu. Ngokushesha nje lapho siqala, imidwebo yayo ingase ingasimangazi, kepha kuvela ukuthi inesethingi esihle, ukukhanya okuhle nokuphathwa kahle kwesikhala ngokuya ngomsindo ozungezile; okwenza lo mdlalo ukuzijabulisa okukhulu.
Ngiyakuqinisekisa, njengoba usinda isikhathi eside, uzolahla ithemba ngokuthi uzoqhubeka uphila. Bazotatazela, futhi bazodubula noma yini abayizwayo noma abayinyakazayo. Futhi lapho becabanga ukuthi bakubonile konke, kukhona okusha okuzobamangaza. 🙂
Ngiyethemba uyithandile, futhi uyajabulisa. Futhi ungadli ubuchopho babo, zivikele! 😀
Isiza esisemthethweniLanda / Thenga
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Imidlalo » [Umdlalo] 'Ivela emkhathini, futhi yadla ubuchopho bethu'. Sinda, inqobo nje uma ukwazi.
Ngiyakuzonda ukungakwazi ukukhokha ngemali yakwamanye amazwe, kodwa yeka ukuthi umdlalo omncane omnandi ubukeka kanjani xD
Ngesizathu esithe xaxa, sebenzisa ngokunenzuzo manje njengoba benokunikezwa futhi ungakulanda ngaphandle kokuchitha isikhathi. Ngithanda imidlalo ye-indie. 🙂
Sengivele ngiyilandile futhi iqiniso liyajabulisa, ukuzihlalela nekhofi ngemuva kwekolishi ... Kuhle kakhulu! ...
Kwenzekeni kumsebenzisi wami? ...
Ifulegi labenzeli bomsebenzisi lihlelwe kabusha. Ngakho-ke kungani ilogo yakwaDebian ingasabonakali kumenzeli wami (angazi, kodwa i-weasel yami ikhululekile kakhulu nelogo ye-Debian ne-Arch kune-Tux).
Bekungaba mnandi ukube ibitholakala ku-Steam ukuze ngiyikhokhele bese ngabelana ngempumelelo yami. Noma kunjalo, Ihhashi lesipho alibheki ezinyo.
Yebo, empeleni ikuSteam Greenlight. Ungabavotela bese uyibuka ku-Steam.
Ngokwami, ngincamela imidlalo engekho endaweni yesikhulumi se-Steam, native.
Futhi ngendlela, ipulatifomu yokudlala iyamangalisa. Ake sibheke ukuthi ngiyaqunga yini ukudala umdlalo ngiwushicilele lapho (kusukela ku-Steam, inqubo ihlelekile kakhulu).
Kuyajabulisa kakhulu, njengokubulala lawo mahora amahhala eyunivesithi.
Siyabonga ngokwabelana ngakho kuyalutha kakhulu!
Ngiyajabula ukuthi uyayithanda .. ..ngibonga ukuphawula;) ..
Ifana kakhulu ne-Alien Swarm, nayo enhle kakhulu yize ithe ukuma kancane ekukhuleni kwayo.
Kuyiqiniso, bengingamazi. Ngithanda uhlelo lwe-co-op yeqembu. Kubi ukuthi kwenzelwe iwindi kuphela.
Okukhazimulayo! Akukho okufana nesikhathi esihle esidala!